ဆိုတင္​သြင္​း — Steemit
goldbaby (34)in #esteem •3years ago
ကျန်းမာရေးမဟာဗျူဟာ-ဒါခေါ် "ဆိုဒါအခွန်," သို့မဟုတ်သကြား-ဒူအဖျော်ယမကာ-ကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းပိုမိုလူကြိုက်များလာခဲ့သည်၏စျေးနှုန်းပေါ်ပေါက်တဲ့ sugary သောက်အခွန်ထောက်ခံပါတယ်။ လေ့လာမှုမှာသုတေသီအဖြစ်တာ 20 အဖြစ်% အားဖြင့် sugary အချိုရည်၏ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်ဖို့ခန့်မှန်းခဲ့သည့်အောင်စနှုန်း $ 0.015 မှာဇန်နဝါရီလ 2017-One အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်အတွက် steepest ၏အကောင်အထည်ဖော် Philadelphia တွင်ဖွင့် sugary သောက်အခွန်၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်။ Philadelphia တွင် Drexel University မှသုတေသီတွေကအခွန်၏ပထမနှစ်လအတွင်းနေထိုင်သူများ '' စားသုံးမှုလေ့လာနေနှင့်အခွန်မတိုင်မီသောက်သုံးအစီရင်ခံ
ဘယ်လောက်လူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်မြို့တော်ရဲ့အဖျော်ယမကာအခွန်များ၏ရေတိုရေရှည်ထိခိုက်မှုမှာကြည့်ရှုကြ၏။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆေးပညာဂျာနယ်တွင်အမေရိကန်ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။ TIME ကကနျြးမာရေးသတင်းလွှာ နောက်ဆုံးပေါ်ကျန်းမာရေးနှင့်သိပ္ပံသတင်း Get ပေါင်း: မီးလောင်ရာမေးခွန်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်များ။ ကြည့်ရန်နမူနာ ယခုဝင်မည် အခွန်စတင်ခင်နှင့်အပြီးအဆိုပါသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့
သကြား-ဒူအဖျော်ယမကာအလေ့အထအကြောင်းကို Philadelphia တွင်အနီးကပ်ရန် 900 ယောက်ျားမိန်းမတို့မေးသောအခါ, သူတို့လညျးသုံးအခြားမြို့များ (; ကန်ဒန်းနယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့်ဝီလ်မင်တန်, ဝဲ Trenton, နယူးဂျာစီ) တွင်နေထိုင်နေနှင့်ပတ်သက်ပြီး 900 လူတွေကိုမေးတယ်။ Philadelphia တွင်နေထိုင်သူများအခွန်လွန်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာ sugary ဆိုဒါမသောက်အစီရင်ခံရန် 40% လျော့နည်းဖွယ်ရှိ ရှိ. , စွမ်းအင်ဖြည့်အချိုရည်သောက် 64% လျော့နည်းဖွယ်ရှိ။ အဲဒီအစား, သူတို့ကပိုရေသောက်သလိုပဲ; ဒေသခံများကနေ့တိုင်းပုလင်းရေသောက် 58% ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ အဆိုပါသုတေသီများလင်မနစ်သို့မဟုတ် cranberry သီးဖျော်ရည်များကဲ့သို့ sugary အသီးအချိုရည်များတွင်ကျဆင်းမှုကိုမမွငျခဲ့သညျ။ အဲဒီမှာ (စ
အခွန်ကောက်ခဲ့ပြီးသော) အစားအသောက်အဖျော်ယမကာများစားသုံးမှုအတွက်ကျဆင်းမှုခဲ့ကြသည်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစာရင်းအင်းသိသာဘူး။ "သကြား-ဒူအဖျော်ယမကာတစ်ခုမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုကြီးထွားလာအသိအမှတ်ပြုမှုရှိတယ်, နဲ့သကြား-ဒူအဖျော်ယမကာသူတို့ပါပြီသကဲ့သို့စျေးပေါမဟုတ်လျှင်စားသုံးသူကိုအခြားအဖျော်ယမကာကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်နိုင်သည်" လေ့လာမှု Co-စာရေးဆရာမေီ Auchincloss တစ်ခုတွဲဖက်ပါမောက္ခကပြောပါတယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး Drexel ရဲ့ Dornsife School မှာ။ နောက်ထပ်: Soda အခွန်တကယ်တော့အလုပ်သလား? တချို့ကကျွမ်းကျင်သူများကြောင့်
အဖျော်ယမကာအခွန်အမှန်တကယ်အသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိ, မရှိတုန်းပဲအချို့သောအဘို့ကိုသိရန်စောလွန်းရဲ့ငြင်းခုန်။ Philadelphia တွင်, ထိုအခွန်အခများသည်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာလွန်မခံခဲ့ရပေမယ့်မြို့ရဲ့ Pre-သူငယ်တန်း programming ကိုတစ်ခုတိုးချဲ့တူသောရန်ပုံငွေအမှုအရာအားကူညီနိုင်ရန်မြို့အဘို့ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဖို့။ သို့သော်အချို့သောအစပျိုးအလားအလာရလဒ်များကိုဖေါ်ပြခြင်းနေကြသည်။ ဘာကလေ, ကယ်လီဖိုးနီးယား, သုတေသနသကြား-ဒူအဖျော်ယမကာအပေါ်တစ်ဦးအခွန်သွား 2015 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအမေရိကန်ကမြို့ဖြစ်လာခဲ့သည်ပြီးနောက်တစ်နှစ် Berkeley ရှိသကြား-ဒူအချိုရည်၏ရောင်းအားနီးကပ်မှ 10% ကျဆင်းသွားပြနဲ့ရေရောင်းအား 16% အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အလားတူပေါက်မက္ကစီကိုအစီရင်ခံခံပြီ တိုင်းပြည် 2014 ခုနှစ်
က၎င်း၏အခွန်အကောင်အထည်ဖော်တစ်နှစ်ပြီးနောက်, သကြား-ဒူအဖျော်ယမကာများဝယ်ယူမှုအတွက်ပျမ်းမျှ 6% ကျဆင်းနှင့်အခွန်ရာအရပျထဲမှာမကြီးလျှင်မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုနှိုင်းယှဉ် untaxed အဖျော်ယမကာအတွက် 4% ပျမ်းမျှအားတိုးရှိ၏။ လက်ရှိလေ့လာမှုသာ Philadelphia တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်ကိုချက်ချင်းပြီးနောက်အခွန်များ၏သက်ရောက်မှုသို့တစေ့တစောင်းပေးထားပါတယ်။ လူတွေရဲ့သောက်သုံးရေအလေ့အထနှစ်ခုလလေ့လာမှုကာလပြီးနောက်ဆက်လက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာမရှင်းလင်းပါတယ်။ သို့သော်စာရေးသူမက္ကဆီကို၏နေထိုင်သူများအကြားဆော်ဒါစားသုံးမှုအတွက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ကြောင်းထောက်ပြလေ့လာမှုပညတ်တရား၏ကျမ်းပိုဒ်ပြီးနောက်မှာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ဆက်လက်ပါပြီ။
#goo-karma #life #time #knowledge
3 years ago in #esteem by goldbaby (34)